एकैपटक ४ जना बच्चालाई जन्म ! आमा भन्छिन् -एउटालाई फकाउन थाल्यो, अर्को रुन्थ्यो | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १४ माघ २०७५, सोमबार १३:३० लेखक नेपाली जनता
२० वर्ष पुराना मात्र तीन सवारी नियन्त्रणमा
चितवन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले २० वर्ष पुराना सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन शुरु गरेको छ ।
नीतिविपरीत निगम : मूल्य समायोजनमा अनिच्छुक
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नीति आयल निगमको थियो । तर दुई…
काठमाडौं। मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा शुल्क उठाएको आरोप खेपेको मलेसिया भीएलएन प्रालिलाई वैदेशिक रुोजगार विभागकै तत्कालिन…
भारतीय फिल्म अवार्डका लागि सरकारले छुट्यायो एक अर्ब, आफ्नाे चाहिँ ३ वर्षदेखि थन्क्याएको छ !
काठमाडौं । राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने चलचित्र जगतको राष्ट्रिय अवार्ड नेपालमा आयोजना नभएको तीन वर्ष भइसकेको छ। राष्ट्रको बेफुर्सदीका कारण…
सम्पादक बस्नेतमाथि भएको सांघातिक आक्रमणप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्दै ‘सल्लेरी खबर डट कम’का सम्पादक दिनेश बस्नेतमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको…